OFakazi BakaJehova—Izenzakalo Zethu Ezikhethekile | JW.ORG
Umhlangano Wesifunda WaseTagalog ERome—“Ukuhlangana Komndeni Omkhulu!”
Ezinkulungwaneni zoFakazi BakaJehova abakhuluma isiTagalog e-Europe, lo bekungumhlangano wokuqala ngolimi lwabo.
Asifuni Ukuba Kuphele
Bona uthando nobunye phakathi bakwabantu bezinhlanga ezingefani, izilimi namaqembu ezizwe kulo mhlangano okhethekile owawuseYangon, eMyanmar.
Isipho Samathikithithi Endiza Angu-19 000
INdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova yasiza izithunywa zevangeli nabanye abasenkonzweni ekhethekile yesikhathi esigcwele ukuba baye emihlanganweni yasemakhaya futhi babe kanye nemindeni yakubo.
Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi Lesi-138 Le-Watchtower Bible School of Gilead
Abafundi bathweswa iziqu ngo-March 14, 2015. Ababekhona bakhuthazwa ukuba baqhubeke befunda ngoJehova futhi balingise isibonelo sikaJesu.
Amanqampunqampu Okuthweswa Iziqu Ekilasini Le-138 E-Gilead
Esimisweni sokuthweswa iziqu kwakunezingoma zoMbuso ezine ezintsha futhi kwagcizelelwa lokho ababethweswa iziqu okufanele bakwenze ngamalungelo abo nangokuqeqeshwa kwase-Gilead.
Bamunye Othandweni—Umhlangano WaseFrankfurt, EGermany
Izinkulungwane zabantu abavela emazweni ahlukahlukene bahlangana ngobunye nangokuthula.
Imihlangano Yezizwe Ka-2014—OFakazi BakaJehova Bafuna UMbuso KaNkulunkulu Kuqala
Bukela abazalwane bomhlaba wonke behlangana bezofunda ngoMbuso kaNkulunkulu.
Umbiko Womhlangano Waminyaka Yonke—October 2014
Lo mhlangano waminyaka yonke oyingqopha-mlando wawungowokugubha iminyaka eyikhulu kwamiswa uMbuso kaMesiya.
I-Atlanta Yamukela Ngokufudumele OFakazi BakaJehova
Izikhulu zedolobha zancoma futhi zamukela izihambeli zomhlangano ezivela emazweni angu-28 ezathamela imihlangano yesifunda emithathu emikhulu ngo-July nango-August 2014.
Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi Le-137 Le-Watchtower Bible School of Gilead
Bonke ababekhona bakhunjuzwa ukuba bathobeke futhi baqhubeke begxilisa imicabango kaJehova ezinhliziyweni zabo.
Amanqampunqampu Okuthweswa Iziqu Ekilasini Le-137 E-Gilead
Kusukela ngo-1943, iSikole Sase-Gilead besilokhu siqeqesha abafisayo ukuba bakhule olwazini lwabo olunembile ngoNkulunkulu. Funda amanqampunqampu esimiso sokuthweswa iziqu.
Amanqampunqampu Omhlangano Waminyaka Yonke​—October 2014
Izinkulungwane zezihambeli zahlangana emhlanganweni waminyaka yonke we-130 we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Bona amanqampunqampu alesi senzakalo sokugubha iminyaka engu-100 yokubusa koMbuso.
INdikimba Ebusayo Ikhuthaza OFakazi ERussia Nase-Ukraine
Amalungu eNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova avakashela eRussia nase-Ukraine ukuze aqinise abanye oFakazi ababhekene nezinxushunxushu zezombangazwe.
Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi Le-136 Le-Watchtower Bible School of Gilead
Othisha nezinye izikhulumi bakhuthaza abafundi ukuba bahlakulele isimo sengqondo esifana nesikaJesu. Ababekhona bajabulela izingxoxo nemiboniso yokulingiswa kwalokho okwakwenzeke enkonzweni yasensimini.
Amanqampunqampu Okuthweswa Iziqu Kwekilasi Le-136 EGileyadi
Isimiso sokuthweswa iziqu sihlanganisa izinkulumo, izigxoxo kanye nokulingiswa kokuhlangenwe nakho kwasensimini.
Umbiko Womhlangano Waminyaka Yonke​—October 2013
Bukela umbiko walesi simiso esimnandi nesiyingqopha-mlando, esasibukelwe emazweni angu-1 830.
Umhlangano Owasakazwa Bukhoma Ngosizo Lwe-Internet
Yini eyenza abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-1,4 emazweni angu-31 bakwazi ukwethamela lesi senzakalo esikhetheke kangaka?
Izilaleli ezingaphezu kwezigidi ezingu-1,4 emazweni angu-31 zasijabulela lesi senzakalo esiyingqopha-mlando, okwakhululwa kuso INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele ebuyekeziwe ngesiNgisi.
Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi Le-135 E-Watchtower Bible School of Gilead
Kwaba khona abangaphezu kuka-10 000 kulesi senzakalo esijabulisayo sobuKristu ngo-September 14, 2013. Bukela i-video ebonisa amabalengwe.
Umhlangano Okhethekile E-Israel
Ehlobo lika-2012, eTel Aviv kwabonakala ubunye obubabazekayo bezizwe ezihlukahlukene kulelo zwe osekuphele amakhulu eminyaka lihlukene phakathi ngokobuhlanga nangokwenkolo.
Amabalengwe Okuthweswa Kweziqu Kwekilasi LaseGileyadi Le-135
Lesi sikole seBhayibheli siqeqesha izikhonzi esezimnkantsh’ ubomvu ezingoFakazi BakaJehova ukuba ziphumelele ngisho nakakhulu ezabelweni zazo.
Umhlangano Okhethekile E-Ireland
OFakazi BakaJehova eDublin bamukela izivakashi zakwamanye amazwe ezazize eMhlanganweni Okhethekile Ka-2012 owawunesihloko esithi ‘Qapha Inhliziyo Yakho!’ Bona lokho abanye abakushoyo ngalo mhlangano.
Imihlangano Ekhethekile YoFakazi BakaJehova Emazweni Angu-7
OFakazi BakaJehova basanda kuba nemihlangano ekhethekile eBrazil, eCosta Rica, eHong Kong, e-Ireland, e-Israel, eNew Zealand, naseSweden.
Isiqeshana Se-video: Isimiso Somhlangano Waminyaka Yonke—October 2012
Izihambeli ezivela emazweni ahlukahlukene zahlangana ukuze zizokwethamela umhlangano waminyaka yonke owaqala eminyakeni engu-128 edlule we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
Isiqeshana Se-video: Izingxoxo—Ikilasi LaseGileyadi Le-133
Buka iziqeshana ze-video ezithathwe engxoxweni nabafundi ababili abebesekilasini laseGileyadi le-133.
Isiqeshana Se-Video: Isimiso Sokuthweswa Iziqu—Ikilasi LaseGileyadi Le-133
Jabulela amanqampunqampu esimiso sokuthweswa iziqu sekilasi laseGileyadi le-133.
Isiqeshana Se-video: Amabalengwe Okuthweswa Iziqu Kwekilasi LaseGileyadi Le-134
Lesi sikole siye saqeqesha izithunywa zevangeli phakathi neminyaka engu-70 edlule. Bukela amabalengwe esimiso sokuthweswa iziqu.
Isiqeshana Se-video: Amabalengwe EMihlangano Yezizwe Yango-1963
Bukela iziqeshana ze-video edlala amahora amabili yeMihlangano Yezizwe yango-1963 ethi “Izindaba Ezinhle Zaphakade.”
Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi Le-134 Le-Watchtower Bible School of Gilead
Ikilasi le-134th le-Watchtower Bible School of Gilead lathweswa iziqu ngo-March 9, 2013. Isimiso sabhekisela endleleni lesi sikole esiye saba negalelo ngayo kusukela ekusungulweni kwaso eminyakeni engu-70 edlule.
Ukukhumbula Umhlangano “Wakuwo Wonke Umhlaba”
Eminyakeni engu-50 edlule, oFakazi BakaJehova abangu-583 bathatha uhambo lwamasonto ayishumi olwaluya kuwo wonke umhlaba.
Umbiko Womhlangano Waminyaka Yonke—October 2012
Abantu abayizinkulungwane balalela imibiko ekhuthazayo nengxoxo ethakazelisayo kaMathewu 24:45-47 emhlanganweni waminyaka yonke we-128 we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi Le-133 E-Watchtower Bible School of Gilead
Abafundi abangu-48 abavela emazweni ahlukahlukene baye baphothula esikoleni sezinyanga ezinhlanu sokutadisha ngokujulile iBhayibheli. Funda amanqampunqampu esimiso sokuthweswa iziqu.